Isbadalka La Rabo,Yaa Ka Hirgalin Kara Somaliland? Wq,Maxamed Dahir Axmed. | Haqabtire News
Isbadalka La Rabo,Yaa Ka Hirgalin Kara Somaliland? Wq,Maxamed Dahir Axmed.
Mudane, cabirahaman Cirro waa Murashaxa Xisbiga Wadani,waxana uu ahaa tobankii sanno ee u danbeeyay hogaamiyaha dhadhaar ka mid ah saddexda dhadhaar ee dawladu ka kooban tahay (fulinta,garsoorka,iyo sharci dajinta). Maadaaba oo uu dhadhaarkii sharci dajinta ku guuldarastay,waxba soo kordhin mayso in Madaxwayne laga dhigaa. Ta kale,nimanka imika Wadani,wadahadalka la bilaabay,waa kooxdii wixii Kulmiye iyo Madaxwayne Siillanyo ka khaldamay masuulka ka ahaa,oo wax badan oo Kulmiye maanta gaadhi lahaana,adhaxda ka jabiyay. Sidaa daraadeed Cirro iyo kooxdaasi waa dadka ay tahay in dalka laga qabto si isbadal iyo horumar loo gaadho. Somaliland ooma baahna nin ay koox ay isku reer yihiin ku adeegato.